နည်းပညာ နယ်ပယ်က Senior တစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ - Myanmar End User
By Myanmar End User April 10, 2017 1578 views
ဒီ အကြောင်းအရာကို အရင်ကတည်းက ရေးချင်ခဲ့ပေမယ့် လုပ်သက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားနေတာရယ်၊ တခြား အချက်အလက်တွေ လိုအပ်သေးတယ်လို့ ခံယူမိနေတာ ရယ်ကြောင့် မရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အခု နိုင်ငံခြား လုပ်သက် ၆ နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်လို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို သိသလောက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Stringlive < SE,SG >
ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်ဝေမျှရရင် တကယ် အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ Developer တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ အတွက် အနည်းဆုံး ၃၊၄ နှစ်လောက် ပေးဆပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေမှာ ထည့်သွင်း မေ့ပစ်ထားသင့်တဲ့ အရာက လစာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လစာ ၁ သိန်းကနေ ၃ သိန်းလောက် အထိ ပဲ ရနေတဲ့ အနေအထား တစ်ခုမှာ ကိုယ့် ရည်မှန်းချက်က ဘာမှန်း မသိဖြစ်နေတာ မျိုးကို ခံစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီ အခြေအနေ ကို ဒီလမ်းကို လျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ Senior တော်တော်များများ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြဖူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တုန်းက ဆိုရင် တစ်လကို လစာ ၃၅၀၀၀-၅၀၀၀၀ လောက်ပဲ ရခဲ့တဲ့ အခြေအနေထိ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ ရတဲ့ လစာကို ကန်တင်းမှာ လပေး ပေးစား ထားလိုက်တယ်။ ကားခ ကျန်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျားခုတ်ကျားခဲ ဖြတ်သန်း ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။
ခံယူချက် မှန်ဖို့ လိုပါတယ်
Company က ပေးတဲ့ လစာကို ကျေကျေနပ်နပ်ပဲ ရယူခဲ့တယ်။ သူတို့က အတွေ့အကြုံတွေ ပေးသလို၊ လစာလဲ ပေးထားတယ်လို့ပဲ ခံယူခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်က ပေးတဲ့ လက်တွေ့သင်္ခန်းစာဟာ ဘ၀ အတွက် တကယ် အဖိုး မဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ သာ နားလည် လက်ခံထားလိုက်ပါတယ်။
ဒီ အကွောငျးအရာကို အရငျကတညျးက ရေးခငြျခဲ့ပမေယျ့ လုပျသကျကို ထညျ့သှငျး စဉျးစားနတောရယျ၊ တခွား အခကြျအလကျတှေ လိုအပျသေးတယျလို့ ခံယူမိနတော ရယျကွောငျ့ မရေးဖွဈခဲ့တာပါ။ အခု နိုငျငံခွား လုပျသကျ ၆ နှဈကြောျလာပွီဖွဈလို့ ကွုံတှေ့ခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ အတှေ့အကွုံတှကေို သိသလောကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အတှေ့အကွုံကို ပွနျလညျဝမြှေရရငျ တကယျ အတှေ့အကွုံ ရှိတဲ့ Developer တဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ အတှကျ အနညျးဆုံး ၃၊၄ နှဈလောကျ ပေးဆပျကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ အခွအေနမှော ထညျ့သှငျး မေ့ပဈထားသငျ့တဲ့ အရာက လစာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာပွညျမှာ လစာ ၁ သိနျးကနေ ၃ သိနျးလောကျ အထိ ပဲ ရနတေဲ့ အနအေထား တဈခုမှာ ကိုယျ့ ရညျမှနျးခကြျက ဘာမှနျး မသိဖွဈနတော မြိုးကို ခံစားကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျတော့ ဒီ အခွအေနေ ကို ဒီလမျးကို လြှောကျခဲ့ဖူးတဲ့ Senior တောျတောျမြားမြား ဖွတျသနျးခဲ့ကွဖူးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတောျတို့ တုနျးက ဆိုရငျ တဈလကို လစာ ၃၅၀ဝဝ-၅၀ဝဝဝ လောကျပဲ ရခဲ့တဲ့ အခွအေနထေိ ကွုံခဲ့ဖူးတယျ။ ရတဲ့ လစာကို ကနျတငျးမှာ လပေး ပေးစား ထားလိုကျတယျ။ ကားခ ကနြျတယျ။ အဲဒီလိုပဲ ကြားခုတျကြားခဲ ဖွတျသနျး ကွိုးစားခဲ့ရပါတယျ။
ခံယူခကြျ မှနျဖို့ လိုပါတယျ
Company က ပေးတဲ့ လစာကို ကြကြေနေပျနပျပဲ ရယူခဲ့တယျ။ သူတို့က အတှေ့အကွုံတှေ ပေးသလို၊ လစာလဲ ပေးထားတယျလို့ပဲ ခံယူခဲ့ပါတယျ။ အလုပျက ပေးတဲ့ လကျတှေ့သငျ်ခနျးစာဟာ ဘဝ အတှကျ တကယျ အဖိုး မဖွတျနိုငျဘူးလို့ သာ နားလညျ လကျခံထားလိုကျပါတယျ။
ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အလုပ်လုပ်လာလိုက်တာ ၃ နှစ်လောက်ကြာတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ထွက်လုပ်သင့်ပြီလို့ ယူဆတဲ့အခါ ထွက်လာ ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Interview တွေ သွားတဲ့အခါ နည်းပညာ Certificates တွေ ဖြေထားတာ က တစ်ကြောင်း၊ လုပ်သက် အတွေ့အကြုံ ရှိတာ က တစ်ကြောင်း ကြောင့် အင်တာဗျူး တော်တော်များများ ကမ်းလှမ်းတာ ခံခဲ့ရသလို ပထမ တစ်လမှာပဲ အလုပ်ရခဲ့တယ်။ ယခု လက်ရှိ အလုပ်ကတော့ Semiconductor မှာပါ။ ဒီ Semiconductor နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Domain Knowledge ကို စိတ်ဝင်စား နှစ်သက်မိတာ ကြောင့်ပါ။ Microchips ထုတ်လုပ်ပုံတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ၊ သူတို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ် တွေ ကို လေ့လာ သင်ယူခွင့် ရနေခဲ့ပါတယ်။
နည်းပညာပိုင်းမှာ ဆိုလဲ သူတို့က
စတာတွေ သုံးထားသလို Programming Languages တော်တော်စုံစုံလဲ ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ တခါတရံ Delphi အထိ ဆင်းရေးပေးရသလို OS မျိုးစုံ နဲ့ Windows XP အထိ ဆင်း ကိုင်သင့်တဲ့အခါလဲ ကိုင်ပေး ရပါတယ်။
– Recipe Set up လုပ်ပုံတွေ
– Lots တွေရဲ့ Track in , Track out စစ်တဲ့ စနစ်တွေ
– Real Time Data ထိန်းချုပ်ပုံ နည်းစနစ်တွေ၊
– Reports တွေ၊
– Commands Lines တွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေ
– Wafer Map ရေးဆွဲ ပုံတွေ
Support ပိုင်း ကတော့ Production issue ပေါ်မူတည်ပြီး 24/7 ရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တစ်ဖက်က ပြန်တွေးကြည့်ရင် အရင် Company မှာ ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ၊ လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေကို ပြန်ခံစားနေရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်လေး တစ်ခုက Developer တစ်ယောက်ဟာ “အခု ရေတွင်းတူး၊ အခု ရေကြည်သောက်” လို့ မရတဲ့ အခြေအနေကို အမြဲ လက်ခံ စဉ်းစားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အသိပေးချင်ပါတယ်။
ဆုံးဖွတျခကြျ ခထြားတဲ့ အတိုငျး ဖွဈအောငျလုပျပါ
ရညျရှယျခကြျနဲ့ အလုပျလုပျလာလိုကျတာ ၃ နှဈလောကျကွာတော့ နိုငျငံခွားမှာ အလုပျထှကျလုပျသငျ့ပွီလို့ ယူဆတဲ့အခါ ထှကျလာ ဖွဈလိုကျပါတယျ။ ပထမဆုံး Interview တှေ သှားတဲ့အခါ နညျးပညာ Certificates တှေ ဖွထေားတာ က တဈကွောငျး၊ လုပျသကျ အတှေ့အကွုံ ရှိတာ က တဈကွောငျး ကွောငျ့ အငျတာဗြူး တောျတောျမြားမြား ကမျးလှမျးတာ ခံခဲ့ရသလို ပထမ တဈလမှာပဲ အလုပျရခဲ့တယျ။ ယခု လကျရှိ အလုပျကတော့ Semiconductor မှာပါ။ ဒီ Semiconductor နဲ့ ပတျသကျတဲ့ Domain Knowledge ကို စိတျဝငျစား နှဈသကျမိတာ ကွောငျ့ပါ။ Microchips ထုတျလုပျပုံတှေ၊ လိုအပျတဲ့ စမျးသပျမှုတှေ၊ သူတို့ အလုပျလုပျတဲ့ စနဈ တှေ ကို လေ့လာ သငျယူခှငျ့ ရနခေဲ့ပါတယျ။
နညျးပညာပိုငျးမှာ ဆိုလဲ သူတို့က
စတာတှေ သုံးထားသလို Programming Languages တောျတောျစုံစုံလဲ ထိတှေ့ခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ တခါတရံ Delphi အထိ ဆငျးရေးပေးရသလို OS မြိုးစုံ နဲ့ Windows XP အထိ ဆငျး ကိုငျသငျ့တဲ့အခါလဲ ကိုငျပေး ရပါတယျ။
– Recipe Set up လုပျပုံတှေ
– Lots တှရေဲ့ Track in , Track out စဈတဲ့ စနဈတှေ
– Real Time Data ထိနျးခြုပျပုံ နညျးစနဈတှေ၊
– Reports တှေ၊
– Commands Lines တှရေဲ့ အသုံးဝငျပုံတှေ
– Wafer Map ရေးဆှဲ ပုံတှေ
Support ပိုငျး ကတော့ Production issue ပေါျမူတညျပွီး 24/7 ရှငျးပေးရတတျပါတယျ။ ဒါတှဟော တဈဖကျက ပွနျတှေးကွညျ့ရငျ အရငျ Company မှာ ပေးဆပျခဲ့တဲ့ အခြိနျတှေ၊ လေ့လာခှငျ့ရခဲ့တဲ့ အကြိုးကြေးဇူး တှကေို ပွနျခံစားနရေတာ ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီမှာ ပေးခငြျတဲ့ မကျဆေ့ခြျလေး တဈခုက Developer တဈယောကျဟာ “အခု ရတှေငျးတူး၊ အခု ရကွေညျသောကျ” လို့ မရတဲ့ အခွအေနကေို အမွဲ လကျခံ စဉျးစားပေးရမှာ ဖွဈပါတယျလို့ အသိပေးခငြျပါတယျ။
နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ရှာတဲ့အခါ Software Developer, System Analyst, Software Engineer စသည်ဖြင့် ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိရင် ရှိသလောက် ရှာဖွေရတာ ပိုလွယ်ကူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ စလျှောက်ကတည်းက SA, SE position တွေကို ကိုယ် Risk ယူနိုင်ရင် ယူနိုင်သလောက် လျှောက်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရှင် တော်တော်များများကတော့ System Analyst, Software Engineer Position တွေနဲ့ အလုပ်လျှောက်ကြတာ များသလို၊ အရာရာ ပြင်ဆင်ပြီးမှ အလုပ်လာရှာကြတာ ဖြစ်လို့ အဲဒီ Position တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေ တော်တော်များများကိုလဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပေးချင်တဲ့ Message က ကိုယ် ပြင်ဆင်ခဲ့ရင် ပြင်ဆင်ခဲ့သလောက် တကယ့် လက်တွေ့ Risk ယူဖို့ အခြေအနေတွေ ကြုံလာရင်လဲ
အဲဒီ Risk ကို ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စသည်ဖြင့် နှစ်သက်ရာကို လျှောက်ထားနိုင်သလို၊ အဲဒီ ယူတဲ့ risk ပေါ်မူတည်ပြီး လစာ အနည်း၊ အများ ကွာသွားနိုင်ပါတယ်။
အခု သင်ယူခွင့်ရနေတဲ့ နည်းပညာရပ်တွေဟာ တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့် နိုင်ငံ အတွက် အကျိုးပြုနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးကိုလဲ ထားသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ နည်းပညာရပ်တွေ နိုင်ငံတွင်းမှာ ပြန်လည် မျှဝေ၊ ယူဆောင်ပေးလာနိုင်မှသာ နိုင်ငံသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ တာဝန်ကျေတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်မျိုးလဲ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ညီငယ်၊ ညီမငယ်တွေကို အကြံပြုချင်တာက ဘယ် အလုပ်ပဲ လုပ်ပါစေ။ စေတနာ ထားလုပ်ပါလို့ မှာချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ Code ဟာ တခြားလူတစ်ယောက် Enhancement လုပ်ဖို့ လွယ်ကူအောင်၊ UI Design တွေ တတ်နိုင်သမျှ သေသပ်လှပအောင်၊ System တွေမှာ အမှားနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ကိုယ်စွမ်းသလောက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
မိမိ အတွက်လည်းကောင်းအောင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ် ကျွမ်းကျင်ရာ နယ်ပယ်ကို ယခုထက် ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် အကောင်အထည် ဖေါ်ကြပါလို့ အကြံပြု တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံ အတိုင်း တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်သာ တကယ် ကျွမ်းကျင်နေပါစေ၊ တစ်ချိန်မှာ လစာ ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်မယ့် Company ကြီးတွေက လက်ကမ်းကြိုနေလျက်ပါ။
အဓိက ကတော့ ဘာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် ရည်ရွယ်ချက်ထား လုပ်ပါ။
သင်ယူနိုင်တာ မှန်သမျှ လေ့လာ သင်ယူပါ။
နိုငျငံခွားမှာ အလုပျရှာတဲ့အခါ Software Developer, System Analyst, Software Engineer စသညျဖွငျ့ ကိုယျ ယုံကွညျမှု ရှိရငျ ရှိသလောကျ ရှာဖှရေတာ ပိုလှယျကူမှာ ဖွဈပါတယျ။ အငျတာဗြူးမှာ စလြှောကျကတညျးက SA, SE position တှကေို ကိုယျ Risk ယူနိုငျရငျ ယူနိုငျသလောကျ လြှောကျထားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက ပညာရှငျ တောျတောျမြားမြားကတော့ System Analyst, Software Engineer Position တှနေဲ့ အလုပျလြှောကျကွတာ မြားသလို၊ အရာရာ ပွငျဆငျပွီးမှ အလုပျလာရှာကွတာ ဖွဈလို့ အဲဒီ Position တှနေဲ့ အလုပျလုပျနကွေသူတှေ တောျတောျမြားမြားကိုလဲ တှေ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ပေးခငြျတဲ့ Message က ကိုယျ ပွငျဆငျခဲ့ရငျ ပွငျဆငျခဲ့သလောကျ တကယျ့ လကျတှေ့ Risk ယူဖို့ အခွအေနတှေေ ကွုံလာရငျလဲ
အဲဒီ Risk ကို ရယူနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
စသညျဖွငျ့ နှဈသကျရာကို လြှောကျထားနိုငျသလို၊ အဲဒီ ယူတဲ့ risk ပေါျမူတညျပွီး လစာ အနညျး၊ အမြား ကှာသှားနိုငျပါတယျ။
အခု သငျယူခှငျ့ရနတေဲ့ နညျးပညာရပျတှဟော တဈခြိနျမှာ ကိုယျ့ နိုငျငံ အတှကျ အကြိုးပွုနိုငျရမယျ ဆိုတဲ့ စိတျမြိုးကိုလဲ ထားသငျ့ပါတယျ။ နိုငျငံတကာ နညျးပညာရပျတှေ နိုငျငံတှငျးမှာ ပွနျလညျ မြှဝေ၊ ယူဆောငျပေးလာနိုငျမှသာ နိုငျငံသား တဈယောကျ အနနေဲ့ တာဝနျကြတေဲ့သူ တဈယောကျ ဖွဈလိမျ့မယျ ဆိုတဲ့ ခံယူခကြျမြိုးလဲ ရှိထားသငျ့ပါတယျ။
နောကျဆုံး အနနေဲ့ ညီငယျ၊ ညီမငယျတှကေို အကွံပွုခငြျတာက ဘယျ အလုပျပဲ လုပျပါစေ။ စတေနာ ထားလုပျပါလို့ မှာခငြျပါတယျ။ ကိုယျရေးတဲ့ Code ဟာ တခွားလူတဈယောကျ Enhancement လုပျဖို့ လှယျကူအောငျ၊ UI Design တှေ တတျနိုငျသမြှ သသေပျလှပအောငျ၊ System တှမှော အမှားနညျးနိုငျသမြှ နညျးအောငျ ကိုယျစှမျးသလောကျ အကောငျးဆုံး လုပျဆောငျပေးပါ။
မိမိ အတှကျလညျးကောငျးအောငျ၊ ကိုယျ့နိုငျငံ၊ ကိုယျ ကြှမျးကငြျရာ နယျပယျကို ယခုထကျ ပိုမို ကောငျးမှနျအောငျ အကောငျအထညျ ဖေါျကွပါလို့ အကွံပွု တိုကျတှနျးခငြျပါတယျ။
ကိုယျ့ဘဝကို ကိုယျကွိုကျတဲ့ ပုံစံ အတိုငျး တညျဆောကျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျသာ တကယျ ကြှမျးကငြျနပေါစေ၊ တဈခြိနျမှာ လစာ ကောငျးကောငျး ပေးနိုငျမယျ့ Company ကွီးတှကေ လကျကမျးကွိုနလေကြျပါ။
အဓိက ကတော့ ဘာအလုပျပဲ လုပျလုပျ ရညျရှယျခကြျထား လုပျပါ။
သငျယူနိုငျတာ မှနျသမြှ လေ့လာ သငျယူပါ။
+ Work Experience ဘယ်လို ယူထားသင့်သလဲ ?
+ Programmer ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ်
+ Work Experience ဘယျလို ယူထားသငျ့သလဲ ?
+ Programmer ဖွဈကို ဖွဈရမယျ